Sida loo kiciyo loona habeeyo xakamaynta waalidka ee Android | Androidsis
Eder Ferreno | | Tababarada
Isticmaalayaasha Android way yeelan karaan sababo badan si aad ugu hawlgeliso xakamaynta waalidnimo qalabkaaga ama qalabka carruurtaada. Waalidiin badan ayaa caruurtooda u iibiya telefoonada iyaga oo yar. Suurtagal ma ahan in la xakameeyo waxa ay carruurtu sameeyaan mar walba. Sidaa darteed, xakamaynta waalidka waxaa loo soo bandhigay caawimaad dheeri ah, taas oo ka hor istaageysa carruurta inay helaan waxyaabaha aan habboonayn.
Xakamaynta Waalidka Markii Ugu Horaysay Lagu Soo Bandhigay Android 5.0. Tan iyo markaas, dhammaan noocyada nidaamka qalliinka waxay leeyihiin muuqaalkan. Halkan waxaan ku tusineynaa habka loo kiciyo loona maareeyo sida ugu fiican telefoonka iyo Google Play.
1 Samee xakameynta waalidka
2 Xakamaynta waalidka ee Google Play
Samee xakameynta waalidka
Si aad u awoodo inaad ku isticmaasho kontaroolada waalidnimo taleefanka Android, waa inaan ku abuurno isticmaale cusub qalabka. Laakiin, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan go'aan ka gaarnno oggolaanshaha aan siinno koontadaas. Marka ma heli doontid marin dhammaan waxyaabaha ku jira. Si tan loo sameeyo, waa inaan marka hore galnaa setinka taleefanka. Dhexdooda, waxaan aadeynaa qeybta isticmaaleyaasha. Halkaas waa inaan ku darno isticmaale cusub ka dibna aan go'aan ka gaarno rukhsadaha ay yeelan doonto. Haddii aan u maleyno inay lagama maarmaan tahay, xitaa waan xakameyn karnaa wicitaanada iyo SMS.
Android waxay noo ogolaaneysaa inaan dhigno PIN ama lambarka sirta ah kala duwan oo loogu talagalay isticmaale kasta. Marka marin u helkaasi si aad ah ayaa loo xakameeyaa. Marka lagu daro ka hortagga cunugga inuu galo koontadayada isticmaale, taas oo ah tan leh dhammaan rukhsadaha oo ay maamusho wax walba oo taleefanka ah.
Nasiib darrose, qoraalkii ka horreeyay Android 5.0 haysanin xakamaynta waalidnimo asal ahaan taleefanka. Xaaladdaada, marwalba waad isticmaali kartaa codsiyo badan oo la heli karo loogu talagalay Waxay sidoo kale caawimaad dheeraad ah u yihiin dadka isticmaala.
Xakamaynta waalidka ee Google Play
Taleefanka oo keli ah ma ahan inaan dhaqaajino xakameynta waalidnimo. Waxaan sidoo kale u baahanahay inaan ku sameyno Google Play. Maaddaama ay tahay inaan ka hortagno carruurta inay awoodaan inay iibsadaan dalab oggolaansho la'aan ama marin u helaan ciyaaro ama barnaamijyo aysan isticmaali karin. Tani maahan ikhtiyaarka kaliya, maxaa yeelay waan awoodnaa dhaqaajiso iibsashada faraha, in kaliya aan isticmaali karno ama iibsi xaqiijin. Labada ikhtiyaarba sidoo kale faa'iido ayey u leeyihiin kiiskan.
Marka laga hadlayo Google Play, waan dhaqaajin karnaa si toos ah barnaamijka Play Store ee taleefankeena Android. Marka wax dhibaato ah kuma lahaan doontid arrintan. Markaad ku dhexjirto barnaamijka Google Play Store ee taleefankaaga, fur menu-ga dhinaca barnaamijka. Marka xigta, tag goobaha codsiyada.
Halkaas ayaan ku kulmi doonnaa a qaybta loo yaqaan xakameynta waalidka. Dhexdeeda ayaan ku awoodi doonnaa inaanu ku hagaajino dhammaan dhinacyada la xiriira. Marka waxaa naloo oggol yahay inaan dhigno PIN, tusaale ahaan. Waxaan sidoo kale ku dari karnaa xayiraadaha ku saleysan waxyaabaha laga heli karo dukaanka. Waxaan sidoo kale dooran karnaa heerka da'da ee codsiyada. Sidaa darteed, ciyaarahaas Android ee aan ku habbooneyn carruurta lama tusi doono waqti kasta.
Marka tan la qaabeeyo, Waxaa lagugula talinayaa inaad sidoo kale fuliso aqoonsiga wax iibsiga ee aan soo sheegnay. Sidan oo kale, qofna ma iibsan karo barnaamij ama ciyaar fasax la'aan. Tani waa muhiim, maxaa yeelay waxaa jira barnaamijyo laga yaabo inay da'da ku habboon yihiin, laakiin waa inaad lacag bixisaa si aad uga soo dejiso Android. Sidan oo kale, waad iska ilaalinaysaa dhibaatadan. Maaddaama ay dhici karto inaadan daqiiqad dheg u dhigayn, oo uu ilmuhu soo dajiyo barnaamij aan oggolaansho lahayn. Tallaabooyinka noocan ah, waxaad ka hortageysaa inay taasi dhacdo.
Sidaa darteed, tallaabooyinkan, waxaan ku habeynay xakameynta waalidka ee Android. Sidaa darteed, haddii ay dhacdo in ilmaheennu uu taleefanka u isticmaalo waqti kasta iyada oo aan la ilaalin, waxaan ka hor istaageynaa inuu helo waxyaabo aan ku habboonayn da'diisa. Had iyo jeer way fiican tahay in la baro inay si masuuliyad leh u socdaan oo ay kormeeraan waxay samaynayaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo dejiyo xakamaynta waalidka ee Android
Fuchsia OS hadda waxay ku habboon tahay barnaamijyada Android